​Salafiyada maanta Iyo salafka Nabiga inoo tilmaamay farqigee u dhaxeeya ? – Hoyga Barashada & Faafinta Diinta Islaamka, Kaalmaynta Dadka Raba inay Cilmiga diiniga ah Bartaan
Waxaa soo ifbaxay kooxo sheeganaya salafiya oo dhabtu caqiidadadoodu tahay tan wahaabiyada ee Mohamed Cabdi wahaab Keenay iyadoo markaas doonaya ineey daboolaaan caqiidadadooduiyo magacooda wahaabiyada deeto la baxay SALAFIYA iyagoo iska dhigaya ineey ku taagan yihiin wadadii salafka oo eey Diinta u yihiin difaaca yaal Laakiin dhabtu saa ka fog .
Nabiga caleyhi salaatu wasalaam issagaa ayaa Inoo sheegay dhariiqa saxda ah kadib goortuu yiri :- عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة ) Iyo qowlkii nabiga ee kale ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة )
Ula jedadu waa in Nabigu inoo tilmaamay in la raaco halka eey u batteen ahlu-xaqa oo ah caqiidada saxaabada Iyo taabiciinta ,taabiciintoodii ee salafkii suubanaa qaateen oo eey ku ijmaaceen dhammaan asxaabul madaahibka xaqa usuusha (caqiidada ) taasi oo ah in aan ilaah jiho Iyo Meel aan loo nisbeen Karin oo aan sinaba ilaah Lagu shabbihi Karin makhluuqaadkiisa oo aanu u keen loona ekeeysiin Karin sinaba makhluuqaadkiisa .iyadoo laga duulaayo xadiith ka Nabiga ee saxiixul bukhaariga ee uu Baray reer ashcariyya qabaa,illada loo yaqaan kadib goortey nabiga ka FAA,ideeysan waayeen reer baanu Tamiim .
Nabjga waxa uu ku yiri iyagii iga guddooma bishaaro eeysan iga guddoomin reer banuu tamiim , kadib ayey dhaheen waanu kaa gudoonay ,waxaana kunwarsaneeynaa waxa ugu horeeya ee diintaan ah ,kadib Nabigu waxaa uu ku yiri iyagii sida tan كان الله ولم يكن شيءغيره )
Oo ah micnaha :- Ilaah waa uu jiray iyadoo aaneey jirin wax jiraaba.
ula jeedadu waa in ilaah jiray iyadoo aaneey jirin wax jiraaba , carshiga oo aan jirin samada oo aan jirin Meel sare oo aan jirin ,Jannada oo aan jirin , Malaha,igta oo aan jirin ,Dhul AMA Cir AMA jinni AMA insi oo aan jirin wax ilaaheey uumay oo dhan iyadoo aan jirin buu ilaah jiray keligii oo aan la jirin waxba ….jiho oo aan jirin, Meel oo aan jirin , waanu suu awal ahaa mid aan ka Zuuleen oo aan isbadal ku imaan marnaba Iyo sinaba .
Goortuu abuuray meel sare AMA carshigana ,Ilaah baahi uma qaban , oo uma baahdo makhluuqaadka uu isaga abuuro oo dhan , waayo waa wax walba ka deeqtoone .
Taasi waa waxa ugu horeeya oo uu ilahay baray nabiga iyo inta kheyrka ilaahay lamaagay ee saxaabadiisa aheyd oo eey sii bareen iyana inta kale waana midda ah ijmaaca Iyo salafkii suubanaa eey qaateen .
Caqiidadaasi waa tan uu imaan Shaafici ka yiri :-(iyadaanu baranay hor Iyo Horraan intaanuba baran wax kaleba ) ….
Waana tan uu ka yiri imamkayaga imam Ashcari … qofkaan aqoon ilaaha uu caabudayaba waa qof aan aqoon Ilaaha xaqa lagu caabudo )
waana wax dhab ah qofkaan aqoon ilaaha uu caabudayaba inaanuba ka ansaxeyn cibaado.
Qofkaan cibaadaba ka ansaxinna , aakhiro waxba uma yaaliin.
Hadaba su,aashu waa :- salafiyada kuwa maanta sheegtaayi ma aaminsan yihiin caqiidada salafkaasi eey heeysteen jawaabtu waa maya …!!